About Us - Shanghai Feipeng Izithuthi Co., Ltd
Electric Car Amasondo
'Indoda kudingeka zokwethembeka nobuqotho, njengoba nje inqola noma inqola idinga amasondo.'
Shanghai Feipeng Izithuthi Technology Co., Ltd ngokukhethekile kokuzihlanganisa isondo design kanye umkhiqizo. Feipeng imele izinga kanye nobukhosi kanye ukwethula kini brand Chinese ethnical: Niyue. Feipeng inikeza komuntu siqu isondo design inkonzo futhi OEM inkonzo.
Njengelungu le-CAW (China Aluminium Wheel Quality Association), Feipeng ililalela ngokucophelela nezindinganiso quality. I-engineering kanye izinga ithimba Feipeng has eminyakeni engaphezu kuka-40 nakho kule isondo womshini umkhakha, futhi njalo bophezela ukunikeza ukusebenza ephakeme ehola design isondo kokuzihlanganisa kuwe. Ithimba lethu professional kanye imishini enhle ukuqinisekisa hambo yakho iphephile.
amasondo Niyue kokuzihlanganisa oqhubeka bendabuko ubuciko Chinese ezenza Made in China uyaziqhenya futhi!
Sha-Independent , design patent, uchungechunge thematic , akukho umqondo womunye, akukho zobunjiniyela reverse. Umklamo lwethu oluqinile ingcaca kanye CAE ukuhlaziywa ikhono vumela ngezifiso design ezinsukwini ezingu-3
iRacing umshini esitolo is ezikhethekile yokukhiqiza ubuningi ngokulinganisela amasondo ngezifiso. isikhathi Lead izinsuku ezingu-30
Strictly kulandela ukubonakala nokulawula izinga inqubo. Leminye imigomo kuka-US kanye Japanese ejwayelekile yizimboni njenge, ukusebenzisa-off kanye namandla okubakhona ibhalansi.
Detialed inqubomgomo izinga yesiqinisekiso ukuvikela amalungelo amakhasimende '. Yonke imikhiqizo Feipeng babe izinga esaphila yesiqinisekiso futhi izinyanga ezingu-18 lokunameka iwaranti.